Olee otú dọwara YouTube audio na ala
Olee otú dọwara Audio si YouTube
> Resource> YouTube> Olee dọwara Audio si YouTube
Ị nwere ike mfe ohere nile di iche iche nke ọdịyo si YouTube online. Ma ihe ma ọ bụrụ na ị chọrọ ige ntị na-audio mgbe ị na-adịghị na njikọ Ịntanetị ma ọ bụ na ị chọrọ ọkụ nke ọdịyo na a CD na-ruo mgbe ebighị ebi? Ị nwere ike dọwara ọdịyo si YouTube. Ebe a bụ ezigbo ngwá ọrụ aka. Gụgharia Audio teepu nwere ike mfe dọwara ọdịyo akụkụ nke a YouTube video enweghị àgwà ọnwụ. Mgbe ahụ ị pụrụ nyefee dọwara ọdịyo na gị obere ngwaọrụ dị ka iPod ma na-na ọ laa. Ka anyị nọgide na mmiri na-ahụ otú iji ya.
1 Wụnye YouTube audio Ripper
Pịa Download icon n'elu ibudata omume na awụnyere na kọmputa gị. Ị kwesịrị ị na-ahọrọ nri otu maka gị na kọmputa. The Windows na Mac version nwere yiri arụmọrụ. Na anyị ga-Windows version dị ka ihe atụ.
2 Rip YouTube audio mfe
Na-agba ọsọ usoro ihe omume mgbe nwụnye. Chọta a Record bọtịnụ na n'elu aka ekpe. Pịa ya na-ahapụ ya na ndabere.
Mgbe ahụ gaa youtube.com ịchọta audio-amasị gị. The nkeji ị na-egwu ọdịyo, usoro ihe omume ga-amalite dọwara ọdịyo si YouTube.
3 Play YouTube audio na gị obere ngwaọrụ (nhọrọ)
Mgbe YouTube audio okokụre-akpọ, i nwere ike ịhụ ya na Library. Chetara ọdịyo na pịa Tinye ka iTunes na ala. Mgbe ahụ ị pụrụ ịchọta audio ka e dị ka SAR playlist on iTunes. Fanye gị obere ngwaọrụ dị ka iPod na-emekọrịta iTunes.
Ọ bụrụ na ị chọrọ igwu na ndị ọzọ na obere ngwaọrụ dị ka a Samsung ekwentị, ị nwere ike nri-pịa ọdịyo ịchọta ebe ọ na-echekwara na mgbe nyefee gị Samsung ekwentị aka.
Rịba ama: Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọkụ ọdịyo jidesie a CD, i nwere ike iji iTunes dị ka a free CD burner.
Na nke a YouTube audio Ripper, ị nwekwara ike ime ka ụdaolu nke ọdịyo. Mgbe ịpị mgbịrịgba icon nso audio aha, ị pụrụ ịchọta a bitmap na ala. Ewepụtụ akụkụ-amasị gị na bitmap na-azọpụta ya na-etinye n'ime gị ntị. Na niile dọwara audio, nwere ike ị chọrọ categorize ha. Ịmepụta listi ọkpụkpọ na usoro ihe omume ma na-etinye ọdịyo dị iche iche playlist. Ndenye nkekọrịta nke ọdịyo bụ-ekwe omume. Ị naanị mkpa pịa Facebook icon mgbe ị nwere ike ịkọrọ gị audio mfe na ndị enyi gị.
N'ihi ya, ọtụtụ fancy ọrụ, nri? Ntak download usoro ihe omume na-amalite na ripping YouTube audio site ugbu a na?
Download na tọghata YouTube Playlist ka MP3
Otú na-ekiri YouTube enweghị Flash ma HTLM5 Player
Olee otú iji tọghata AVCHD ka YouTube Ò Kwekọrọ n'Ozizi Formats
YouTube Cropper: Olee otú akuku YouTube Videos
YouTube trimmer: Olee otú ewepụtụ YouTube Videos
Olee otú bulite m2ts ka YouTube?
Top 10 Kasị mmasị na Disliked Videos on YouTube
All Atụmatụ na ị chọrọ maka Ikiri YouTube Videos
Atụ aro YouTube Music ọwa Dị Iche Iche Dị Artists, Genres na N'ókèala
YouTube Music Downloader-Easily Download Music si YouTube
YouTube agaghị akpọ? Download YouTube Flash Player ma ọ bụ Gbalịa HTML5
Esi Audio si YouTube na ala